CCI Trend Pullback Bounce Forex Ukuhweba Isu MT5 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex (MT5) CCI Trend Pullback Bounce Forex Ukuhweba Isu MT5
Ephreli 18, 2021
Lelisu lokuhweba lisebenza ngokuhlangana phakathi kwethremu yesikhathi eside futhi lisho amasignali okuguqula. Lokhu kungenxa yokuthi ukuhweba ngokuya kwenkambiso yesikhathi eside ngokuvamile kunethuba eliphakeme lokuwina uma kuqhathaniswa nokuhweba ngokumelene nomkhuba. Umbuzo uwukuthi uwufaka nini umkhuba. Enye yezindlela ezinengqondo kunazo zonke zokungena emakethe ethrendayo kungokudonswa emuva. Lokhu kusivumela ukuthi singene ekuhwebeni ngokuya ngakomkhuba kepha ngentengo yokungena engcono. Izimakethe zivame ukwehla ngephethini ekhuphukayo noma eyehlayo noma nini lapho isendleleni futhi lokhu kushintsha kunikeza ithuba. Ukungalingani okucashile okufana nezinkomba zokuthenga ngokweqile nokuthengwa ngokweqile kusinikeza ithuba lokubeka isikhathi ukungena kwezimakethe ngokunembe kakhudlwana.
Lezimpahla Channel Index
1 Lezimpahla Channel Index
2 100 Exponential Moving Average
4.3 Indlela ukufaka CCI Trend Pullback Bounce Forex Ukuhweba Isu MT5?
Inkomba Yeziteshi Zempahla (I-CCI) uhlobo lwenkomba olususelwa kumfutho. Ithola ukuqondiswa komfutho, amanani entengo athengwe kakhulu futhi abiwe kakhulu, kanye nokuhlehliswa kwamandla okungenzeka.
Inkomba yeCCI ibala ukweqiswa kwentengo kusuka entengo emaphakathi yezibalo. Ikwenza lokho ngokubala Intengo Ejwayelekile, okuyisilinganiso esiphakeme, ongaphakeme, nokuvalwa kwentengo. Ngemuva kwalokho iya ekubaleni i-Simple Moving average (Isikolo sebanga eliphezulu) Wentengo Ejwayelekile. Esikhathini ngasinye, i-SMA yeNtengo Ejwayelekile isusiwe ku-Intengo Ejwayelekile yamanje. Umehluko ubushelelezi ngokuqhubeka ngokubala i-Simple Moving Average yayo. I-SMA evelayo iphindaphindwe nge 0.015. Inani lokugcina le-CCI bese libalwa ngokuhlukanisa umkhiqizo wesinyathelo sangaphambili ngomehluko phakathi Kwentengo Ejwayelekile yamanje Nesilinganiso Sayo Esishukumisayo Esilula.
Isikhombi seCCI sakha umugqa ogoqa uziro. Ibuye ibe nezimpawu emazingeni -100 futhi 100. Imigqa yeCCI yehla ngezansi -100 khombisa imakethe ethe xaxa, ngenkathi imigqa yeCCI yephula ngenhla 100 khombisa imakethe ethengwe ngokweqile, zombili okuyizimo eziyinhloko zokuguqulwa okushoyo.
Ngaphandle kokuba yinkomba yokuguqula okushoyo, i-CCI ingasetshenziselwa ukukhomba ukwehluka uma kuqhathaniswa nesenzo sentengo.
Ngaphandle kwegama layo, i-Commodity Channel Index ingasetshenziswa kuzinsimbi ezahlukahlukene ezingathengiswa ngaphandle kwempahla, ezifana ngababili lwemali forex.
100 Exponential Moving Average
I- 100 Exponential Moving Average (UMAMA) umugqa uyinkomba esebenzayo yesikhathi eside.
Isilinganiso sokuhamba sezikhathi eziyi-100 singesinye sezindawo ezaziwa kakhulu phakathi nendawo- kunkomba yesilinganiso sokuhamba eside yesikhathi eside abathengisi abayisebenzisayo ukukhomba ukuqondiswa kwesimo.
Abahwebi bakhomba umkhombandlela wesitayela ngokuya ngokuthi isenzo sentengo ngokuvamile sihlobene kuphi ne- 100 Umugqa we-MA. Umkhuba uyakhula noma nini lapho isenzo sentengo ngokuvamile singaphezu kwe- 100 MA, kanye ne-bearish noma nini lapho isenzo sentengo ngokuvamile singaphansi kwe- 100 MA.
Enye indlela abathengisi abayisebenzisayo ukukhomba umkhombandlela wesitayela ngokubheka emthambekeni we 100 Umugqa we-MA. Ngoba ukuhamba okumaphakathi kuya lapho kunenani lentengo yesenzo, Umthambeka wemigqa emaphakathi ehambayo nawo uvame ukugobeka ubheke lapho isenzo sentengo sikhona. Kanjalo, abathengisi bangaqinisekisa ukuqondiswa komkhuba ngokususelwa emthambekeni womugqa wesilinganiso sokuhamba. Umkhuba uyathuthuka noma kunini lapho 100 Umugqa we-MA uthambekele phezulu, futhi bearish noma nini lapho 100 Umugqa we-MA wehlelela phansi.
Phakathi kwezindlela ezahlukahlukene zokubala izilinganiso ezihambayo, i-Exponential Moving average (UMAMA) ingenye ephumelela kakhulu. Kusabela kakhulu ekuhambeni kwamanani kwakamuva, nokho ngasikhathi sinye ibuye igcine ubushelelezi bayo, okwenza kungabi sengozini emsindweni wemakethe. Lokhu kungenxa yokuthi indlela ye-Exponential Moving Average ibeka isisindo esiningi kudatha yamanani yakamuva. Lokhu kudala umugqa ophakathi nendawo oshukumisayo ophendula kakhulu ukunyakaza kwentengo, kepha ngasikhathi sinye inesici se-smoothening ngaphakathi kwesibalo sayo.
Lelisu lokuhweba isu lokuqhubeka komkhuba elihweba ngokuhlangana nesibonakaliso sokuguqula okushoyo. Noma kunjalo, esikhundleni sokuthatha amasignali okuguqula okushiwo kunoma iyiphi indlela, Ukuhweba kuthathwa kuphela kusiqondiso senkambiso yesikhathi eside.
I- 100 Umugqa we-EMA usetshenziselwa ukukhomba ukuqondiswa kwethrendi yesikhathi eside. Lokhu kususelwa lapho isenzo samanani ngokuvamile sihlobene ne- 100 Umugqa we-EMA, kanye nomthambeka wolayini. Abathengisi bese bahlungwa ngokususelwa ekuqondeni komkhuba, ukugwema ukuhweba kunokulwa ne 100 Umugqa we-EMA.
Silinda-ke ukudonswa okujulile okufanele kubangele ukuthi i-CCI ibhekiswe ngaphezulu noma ithengwe ngokweqile ngokususelwa kulayini wayo owela ngezansi -100 noma ukwephula ngenhla 100.
Abathengisi bayathathwa noma kunini lapho kuhlangana khona ikhandlela lomfutho eliya ngakuwo umkhuba kanye nolayini weCCI obuyela emuva ebangeni -100 uku 100, eqinisekisa isignali yokuguqula okushoyo.
Isenzo sentengo kufanele sibe ngaphezu kwe- 100 Umugqa we-EMA.
I- 100 Ulayini we-EMA kufanele wehle phezulu.
Isenzo sentengo kufanele sibe sesikhathini esisekelwe kuphethini ekhulayo ye-swing.
Lindela isenzo sentengo sokuhlehla okubangele ukuthi umugqa weCCI wehle ngezansi -100.
Vula i-oda lokuthenga ngokushesha nje lapho umugqa weCCI unqamula ngenhla -100.
Isenzo sentengo kufanele sibe ngaphansi kwe- 100 Umugqa we-EMA.
I- 100 Umugqa we-EMA kufanele wehle phansi.
Isenzo sentengo kufanele sibe ku-downtrend ngokususelwa kuphethini yokujikisa eyehlayo.
Lindela isenzo sentengo sokuhlehla okubangele ukuthi ulayini weCCI wephule ngenhla 100.
Vula i-oda lokuthengisa ngokushesha nje lapho umugqa weCCI weqa ngezansi 100.
Lelisu lokuhweba livamise ukuba namathuba okuphumelela aphezulu uma kuqhathaniswa nezindlela eziningi ezilandela amasu. Ibuye inikeze ngamasethingi wezohwebo ngokuvamile anezinto ezinhle zenzuzo ngoba abathengisi bavame ukukhiqiza inzuzo ephakeme kakhulu kunobungozi.
Noma kunjalo, leli qhinga akufanele futhi lidayiswe ngokungaboni ngendlela yokwenza. Abahwebi kufanele basebenzise leli qhinga kuphela ezimakethe ezinamathrendi acacile nokushintsha kwamanani okubanzi nokudonswa emuva.
CCI Trend Pullback Bounce Forex Trading Strategy for MT5 is a combination of Metatrader 5 (MT5) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
CCI Trend Pullback Bounce Forex Trading Strategy for MT5 inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka CCI Trend Pullback Bounce Forex Ukuhweba Isu MT5?
Thwebula CCI Trend Pullback Bounce Forex Ukuhweba Isu for MT5.zip
Iya kwesokudla ukukhetha CCI Trend Pullback Bounce Forex Ukuhweba Isu for MT5
Uzobona i-CCI Trend Pullback Bounce Forex Strategy ye-MT5 itholakala kuShadi lakho
Isiqephu esedluleXWPR Histogram Vol Direct MT5 Inkomba
Isihloko esilandelayoInkomba Yokubonwa Kwephethini ye-MT4
I-Trend Magic Reversal Forex Trading Strategy
I-VTS Float Pivot Smoothed MT5 Inkomba
Izinkomba ze-Forex MT54355
Amasu we Forex1108
UTim Morris - Novemba 29, 2021 0